नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको बहस - Karobar National Economic Daily
query_builderJune 25, 2017 9:47 AM supervisor_accountगुणराज भट्ट visibility2239
नेपाली पूँजीबजारको पुनर्संरचनाका विषयमा हालसालै दुईवटा विषय बहसमा आएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट नेपाल सरकार एवम् सरकारी निकायहरूको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय र नियामकबाट अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि पहल सुरु गरिएको विषय । पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासका लागि यी सबालहरू झट्ट हेर्दा राम्रै लागे पनि वस्तुपरक विश्लेषण आवश्यक छ ।
संगठनको गुणस्तर व्यवस्थापनका गुरु एडवार्ड डेमिङले उल्लेख गरेझैं कुनै दुई जना विशेषज्ञ व्यक्तिलाई कुनै दुई विषयको प्राथमिकीकरण गर्न दिइएमा कुन चाहिँ महŒवपूर्ण हो भन्ने कुरा फरक फरक हुने गर्र्दछ ।
त्यसैले अर्थतन्त्रको यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा व्यक्ति र संस्थापिच्छे फरक धारणा आउनु स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ । सुखद पक्ष भने नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र हालको स्टक एक्सचेन्ज निजीकरणका सबालहरू छलफलमा आएका छन् र यसलाई थप बहसमा ल्याइनु जरुरी पनि देखिन्छ ।
कति वटा स्टक एक्सचेन्जको संख्या उचित हुन्छ भन्ने विषयमा अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भ मिश्रित रहेको छ । उदाहरणका लागि भारतमा हाल २३ वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् भन्ने हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ किनकि बम्बे स्टक एक्सचेन्जको बिएसइ सेन्सेक्स मात्र मिडियामा प्रचलित छ । अरू दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा एक÷एक स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् भने बङ्गलादेशमा दुईवटा ।
स्टक एक्सचेन्जका विषयमा पाकिस्तानको विषय एउटा पाठ हुन सक्दछ । सन् १९४७ मा स्थापना भएको कराची स्टक एक्सचेन्ज, सन् १९७० मा स्थापना भएको लाहोर स्टक एक्सचेन्ज र सन् १९८९ मा स्थापना भएको इस्लामावाद स्टक एक्सचेन्जलाई गाभेर सन् २०१६ मा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरिएको थियो ।
यसको मूल उद्देश्य अलगअलग स्टक एक्सचेन्जका कारण खण्डीकृत बजारलाई एकीकृत गरी एउटा सबल स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्ने र प्राविधिक विशेषज्ञता एवम् सहयोगका लागि रणनीतिक साझेदारलाई आकर्षण गर्ने रहेको जनाइएको छ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा २ र हङ्गकङ्गका २ गरी ४ वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् । त्यसै गरी, दक्षिण कोरीयामा समेत २ वटा मात्र रहेका छन् । इरान र युएई बाहेक गल्फ र अन्य पश्चिम एसियाली देशहरूमा एउटा मात्र स्टक एक्सचेन्ज छन् । युरोपेली राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने बेलायत, बेल्जियम र अस्ट्रियामा एउटा मात्र छ भने नेदरल्यान्डस्मा २ र जर्मनीमा ८ वटा छन् ।
प्रस्तुत विभिन्न देशका विकासको स्तर हामी सबैलाई ज्ञात रहेको छ । पूँजीबजारको विकासका लागि तसर्थ एक भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक पर्दछ भन्ने विषय निरर्थक हुन सक्दछ । सुधारका अन्य विविध पक्षहरू नै प्राथमिकतामा पर्दछन् ।
नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय यी अनुभवबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । अर्को संस्था आवश्यक पर्दछ भन्ने विषय दुईवटा तŒवहरूमा भर पर्नु पर्दछ । पहिलो, वर्तमान संस्थाको विकल्प या प्रतिस्पर्धी के खोज्न लागिएको हो ?
दोस्रो, यसले नेपालको पूँजीबजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्दछ कि झन् अर्को समस्या निम्त्याउँछ ? नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विकल्पको रूपमा अर्को एक्सचेन्ज स्थापना गर्न पक्कै खोजिएको हुनु हुँदैन । पूँजीबजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन अर्को स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता देखिएको हो भने विद्यमान संस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास नगरी त्यो सम्भव हुने देखिँदैन ।
क्षमता विकासका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुृधार पहिलो आवश्यकता हुन जान्छ । यससँगै स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण समेत पर्ने नै भयो । स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व सरकारीबाट निजीतर्फ बदल्नुपर्ने भन्ने विषय दिनानुदिन बढ्दै गएको जटिलता, वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको माग तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रको निजीकरणसँगै उठ्ने गर्दछ ।
साथै, पूँजी परिचालनमा विश्वबजारमा देखिएको निजी क्षेत्रको कुशलता र लगातार भइरहेको वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा वित्तीय उदारीकरण, बढ्दो प्रविधि आदिले थप दबाव दिएको छ । विश्वका ठूल्ठूला स्टक एक्सचेन्जहरू समेत गाभिने एवम् रणनीतिक साझेदारी गर्ने जस्ता उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् ।
आज विश्वकै अधिकांश सर्वश्रेष्ठ स्टक एक्सचेन्जहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । सन् १९९० सम्म म्युच्युअल अथवा राज्यद्वारा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना हुने गरेकामा हाल यसको अंश ज्यादै न्यून रहेको छ । स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीहरूसमेत सूचिकृत कम्पनीको रूपमा स्थापना हुने गरेका छन् । यस्तो पहिलो स्टक एक्सचेन्ज सन् १९९३ को स्टकहोम स्टक एक्सचेन्ज हो ।
न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज ‘इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज’ नामक एक होल्डिङ कम्पनीले चलाएको छ र सन् २००७ मा युरोपियन स्टक एक्सचेन्ज युरोनेक्स्ट समेत इन्टरकन्टिनेन्टल एक्सचेन्ज कम्पनीमा गाभिएपश्चात् यो अझ बृहत् र मजबुत भएको मानिन्छ । भारतको चर्चित बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा एउटै कम्पनीको लगानी अधिकतम ४.७५ प्रतिशतमात्र छ भने स्टक एक्सचेन्ज स्थापनामा समेत भारतमा विदेशी लगानी खुला गरिसकिएको छ ।
लन्डन स्टक एक्सचेन्ज संसारकै सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज मानिन्छ जसमा ५० देशका ३५० भन्दा बढी कम्पनीहरूको लगानी रहेको छ । सन् २०११ मा लन्डन स्टक एक्सचेन्ज र टोरन्टो स्टक एक्सचेन्ज गाभिने योजना भोटिङमा अल्पमतमा परेपछि अन्तिम समयमा भङ्ग भएको थियो ।
विकसित देशका स्टक एक्सचेन्जहरू आफैं पनि सूचीकृत कम्पनीहरू भएकामा नेपालमा भने सन् १९९० पछि सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणका थुप्रै प्रयासका बावजुद नेप्सेको बहुमत स्वामित्व सरकारी निकायसँगै रहेको छ ।
वित्तीय नियामकहरूले नै स्टक एक्सचेन्ज चलाइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा अर्को स्टक एक्सचेन्जको कसरत गर्नुभन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै स्वामित्व, स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा सुधार गर्ने र पब्लिक कम्पनीको रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको उपयुक्त विकल्प विकसित मुलुकका स्टक एक्सचेन्जसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु हुन सक्दछ । न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले त युरोनेक्सटसँग मर्ज ग¥यो भने नेपालको स्टक एक्सचेन्जको स्तर ज्यादै न्यून छ ।
यसलाई पनि एक पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापनापश्चात् रणनीतिक साझेदार भित्र्याई प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाएर मात्र अर्को स्टक एक्सचेन्जको विकल्प खोजिनु पर्दछ । अन्यथा, वित्तीय क्षेत्रको दोस्रो अभिन्न अङ्ग पुँजीबजार अझ अस्थिर, खण्डीकृत र अविश्वासी हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
विद्यमान स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण गर्नुका अतिरिक्त विद्यमान कारोबार पद्धतिलाई आधुनिकीकरण गरी विकेन्द्रित र पूर्ण विद्युतीय कारोबार सुरु गर्ने, स्टक एक्सचेन्जको क्रमशः अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र पुँजीबजारलाई अन्य बजारसँग एकीकृत गर्दै जाने जस्ता तीन चरणका सुधारहरू आवश्यक छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन एवम् अनुभवले समेत निजीकरण गरिएका स्टक एक्सचेन्जमा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू सूचीकृत हुन रुचाउने हुनाले लगानी आकर्षण गर्ने एउटा सुधारको क्षेत्र पनि हुन सक्दछ ।
सरकारी लगानीको स्टक एक्सचेन्ज भएमा स्टक एक्सचेन्जको चाहनाअनुसार नभई लगानीकर्ता वा सरकारी निकायको चाहनामा बजार चल्ने सम्भावना रहने र लगानीकर्ता, व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ताबीच कार्य स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता निर्वाहका लागि समेत बाधा उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले स्टक एक्सचेन्ज निजी क्षेत्रसँगै हुनु पर्ने तर्क रहेको छ ।
स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व परिवर्तनले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई खासै असर नपारे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताको मनोबल भने बढाउन सक्दछ । खासगरी, वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित स्वेदशी कम्पनीहरूले निजी स्टक एक्सचेन्ज नै किफायती, विश्वासिलो तथा पारदर्शी हुने विश्वास गर्दछन् ।
निजीकरणका विषयमा केही सावधानीहरू भने आवश्यक हुन्छन् । जस्तो, भारतमा आफूले आफैंलाई सूचीकृत गर्ने अधिकार दिइएको छैन । त्यस्तै, सार्वजनिकबाट निजीमा जाँदा अर्को निजी एकाधिकार सिर्जना नहुनेमा सचेत हुनु पर्दछ । यसका साथै, स्टक एक्सचेन्जसँगै यसको नियमन निकायको समेत सुधार सँगसँगै लगिनु पर्दछ ।
तसर्थ, हालको नेप्सेलाई एक सबल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र कुशल स्टक एक्सचेन्ज नबनाइकन अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिँदैन । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र र वित्तीय विकास न्यून भएको देशमा एउटाभन्दा बढी एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्न सक्दछ । स्टक एक्सचेन्जका अन्य भगिनी संस्थाहरू जस्तो कमोडिटी एक्सचेन्ज र डेरिभेटिभ बजारका लागि भने अलग्गै संस्थागत व्यवस्था समेत मनन योग्य हुन सक्दछ । कमोडिटी एक्सचेन्जको प्रचलन भने निजी क्षेत्रबाट सुरुवात भइसकेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्था सेयर अर्थतन्त्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्टक एक्सचेन्ज